Guddoomiyihii maxkamada sare ee gobolka Sool, Saleebaan Dheere, oo caawa lagu dilay Laascaanood; dilka ayaa waxaa gaystay nin soolane ah oo hubaysan. – Radio Daljir
Guddoomiyihii maxkamada sare ee gobolka Sool, Saleebaan Dheere, oo caawa lagu dilay Laascaanood; dilka ayaa waxaa gaystay nin soolane ah oo hubaysan.
Laascaanood, July 18 – Waxaa caawa, 7:00-dii fiidnimo ee waqtiga Geeska Afrika, la dilay Cismaan Cismaan Hayaan, ‘Saleebaan Dheere’, guddoomiyihii maxkamada sare ee gobolka Sool. Marxuumka ayaa la sheegay in dhawr xabadood laga dhuftay, ayna ka haleeleen madaxa, uuna isla goobta ku dhintay.